कसरी भईइरहेको छ गुल्मीमा मतदान? यस्तो छ लाईभ अप्डेट: – Gulminews
Home/निर्वाचन अप्डेट/कसरी भईइरहेको छ गुल्मीमा मतदान? यस्तो छ लाईभ अप्डेट:
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ मंसिर २१, बिहीबार १२:२५ मा प्रकाशित
मङ्सिर २१ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि दोस्रो चरणको मतदान गुल्मी सहित ४५ जिल्लामा आज विहान ७ बजेदेखि सुरु भएको छ । आजको दिन गुल्मीमा क्षेत्र नं १ बाट १ लाख ५ हजार ४ सय २५ र क्षेत्र नं २ बाट ९० हजार ९ सय १७ जनाले मतदान दिनेछन् ।
मतदान बेलुका ७ बजे सम्म जारी रहने बताईएको छ । गुल्मीमा जारी मतदान सम्बन्धी जानकारी दिन यतिबेला गुल्मीन्युज सहकर्मी राजु गौतम हामीसँग टेलिफोन संपर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँ यतिबेला गुल्मी दरबार गाउँ पालिका साविकको जुभुङ ठुलाचौर स्थित महाकाली निमाबी केन्द्रमा हुनुहुन्छ । उहाँबाट अप्डेट लिऔँ: